के तपाईं कपाल झर्ने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ? कपाल झर्ने रोक्नको लागि यी घरेलु उपचार आपनाउँनुहोस । | पहिलो बोली
के तपाईं कपाल झर्ने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ? कपाल झर्ने रोक्नको लागि यी घरेलु उपचार आपनाउँनुहोस ।
५१५५ पटक पढिएको
के तपाई कपाल झर्ने बारे चिन्तित हुनुहुन्छ? र कसरी कपाल झर्न कसरी रोक्ने, कपाल झर्ने औषधि, कपाल झर्नेका कारणहरू, अचानक कपाल झर्नुको कारण, कपाल झर्ने लक्षणहरू बारे तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ होला ।हामी तपाईंलाई कपाल झर्ने रोक्न केही सजिलो घरेलु उपचारहरू बताउने छौँ जुन तपाईंको लागि उपयोगी साबित हुनेछ।
१)दहि र कागती: दही र कागतीको संयोजनले तपाईंको केश झर्न रोक्न प्राकृतिक मोइश्चराइजरको रूपमा काम गर्दछ। यसले टाउकोको छालाको सुखापन हटाउछ र चायाँ कम गर्दछ। यसको तयारीका लागि दहीमा केही थोपा कागतीको रस मिलाएर कपालमा लगाउनुहोस्। केही समय सुकाएपछि यसलाई धुनुहोस्।
२)तातो तेलले मालिस गर्नुहोस्: कपालको चमक र कपाललै बलियो पार्नको लागि यसलाई तातो तेलले मालिस गर्नुहोस्। यसले कपाललाई पोषण दिन्छ र जाडोको चिसो, सुख्खा हावाबाट छालालाई बचाउँछ।
३)तेल र कपूर: तपाईको टाउको र कपाल चिसो राख्न कपूर र तेलको एक सानो मात्रा मिलाउनुहोस। त्यसपछि यसलाई कपालमा लगाउनुहोस्। यसले चायाँ र चिलाउनबाट बचाउँछ।
४)निम र नरिवलको तेल:यसले टाउकोको छाला चिलाउन बाट रोक्छ र ,फंगसबाट बचाउछ।